काँग्रेसका लागि रगत दिएका मान्छे हौं, हाम्रोलागि पदभन्दा काँग्रेस महत्वपूर्ण छ: नेता बलायर | suryakhabar.com
देशका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा, बुधबारदेखि मौसम खुला हुने
बरिष्ठ नेता नेपालको दाबीः लगानीकर्तालाई डर, त्रास र धम्की दिएर लगानी सम्मेलन सफल हुंदैन !
Home राजनीति काँग्रेसका लागि रगत दिएका मान्छे हौं, हाम्रोलागि पदभन्दा काँग्रेस महत्वपूर्ण छ: नेता बलायर
on: December 20, 2018 In: राजनीति, विशेषTags: No Comments
काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एबम् पूर्बमन्त्री वीरबहादुर बलायरले आफूले र्शीर्ष नेतृत्वको विरुद्धमा प्रस्ताव नराखेको बताएका छन् । महासमिति बैठकमा मत परक राखेको बिष्यमा उनले राखेको फरक मतका बिषयमा उनलाई सोध्दा के भन्छन् त ? हामीले शुसील कोईरालाको नेतृत्वमा जारी भएको सबै नेपालीका लागि बनेको नपालको संविधान २०७२ लाई लागू गर्ने दीशामा सहयोग हुने खाल्का कुराहरु राखेका हौं । मुलुक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा गइसकेपछि हाम्रो विधानले पनि नेपालको संविधान २०७२ लाई प्रतिकुल हुनेगरी दलीत, जनजाती, आदिबासी, महिला, मुश्लिम सबैलाई पदाधिकारीमा नै समेट्नेगरी संघीय संरचना अनुसार, समानुपातिक र समाबेशी रुपमा विधान संसोधन गर्न जरुरी छ भनेका हौं ।
विधान संशोधन गनुपर्ने काँग्रेसको बाध्यात्मक परिस्थिति छ तर काँग्रेस नेतृत्वले हामीले गरेको सबैलाई समेट्ने प्रस्ताव मान्नुको विकल्प छैन । संबिधानको बर्खिलापमा कुनैपनि तहको नेताले जानुहुन्न हाम्रो प्रस्ताव संबिधानले दिएको अधिकारसंग समेत जोडिएको हो । अमुक जाती र अमुक बर्गका लागिमात्र त संविधान हुन्न नि !
दुई/चार जना ब्यक्तीको लागि स्वार्थकाम लागि निर्णय भएको हो त?
नेपाली कांग्रेसको विधान समानुपातिक एवम् समावेशी तरिकाले जानु पर्यो भन्ने कुरा हो । सभापति शेरबहादुर देउवा ज्यू जो संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सबैकुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने लागिराख्या छ । बीपी काईरालाले धनमानसिंह परियारलाई माथी उठाएका थिए, ६० बर्ष अगाडि, उनको वैज्ञानिक ढंगको सोच थियो हामीले पनि त्यस्तै गरौं भन्या हौं । खस आर्य, दलित, जनजाति, महिला, आदिवासी र मधेशी भनेर जुन बाहिर रहेका सबै कलस्टरलाई राज्यको मुल प्रवाहबाट समेटेर अघि बढाउनु पर्छ भन्ने हो । त्यसैले अहिले के भो भन्दा खेरी नि केहि व्यक्तिको निहित स्वार्थका लागि विधान संसोधन हुन लागेको छ, यो कुनै ब्यक्ती वा गुटका लागि आउन लागेको विधानमा हामीलाई मान्य नहुने कुरा ध्यानाकर्षण गर्नमात्र खोजेका हौं । आम नागरीकको आम नेपाली जनताको आम सबै कलस्टर समुदायको पार्टी बनाउनका लागी एकै वर्गले मात्रै राज गर्ने खालको नेपाली कांग्रेस होईन । र विपी कोइरालले धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाउनुभएको ईतिहास अघि पनि भनिसकेको छु । परशुनारायण चौधरीलाई महामन्त्री बनाउनुभएको ईतिहास ताजै छ । हामीलाई थाहा छैन की विपीले यस्तो बनाएको किन हामीले बनाउने भनेर वर्तमानमा धनमासिंह परियार र परशुनारायण चौधरी छैनन् र? हामीसंग काँग्रेसमा यथेस्ट संघर्ष गरेका व्यक्ति छैनन् र ? यो बैठक अवरुद्ध भएको होइन हामीले हाम्रा कुरा राख्यौ त्यसका विरुद्धमा चाहिने नेताहरु लागेका नेताहरु झस्किएका छन् । फेरी केन्द्रीय समिति बैठकमा हामीले हाम्रा कुरा राख्ने छौं ।
सांसद ज्यू र्शीर्ष नेतृत्वले गरेको निर्णय कसरी एउटा व्यक्तिको स्वार्थको लागी भयो ?
जे जो त्यहां बसेर निर्णय गरे त्यो सब निहित स्वार्थका लागी गएिको थियो । हामी कांग्रेसका लागि रगत दिएका मान्छे हौ । हामीलाई पद चाहिएको छैन । हामीलाई हाम्रो काग्रेस चाहिएको छ । सम्पूर्ण जातजाति धर्म लिगं समुदाय, वर्ग गायत सबै समुदायको कांग्रेस हामी देख्न चाहन्छौ ।
तपाई निकट मानिने नेता अहिले सभापतिको विरुद्धमा उभिनु भयो हैन ?
म उहां कै पक्षमा उत्रिएको हुं, कि मैले पार्टीका मुद्धा छोडें भन्नुपर्यो नत्र अडान कायम राख्नुपर्यो, तपाई आफैं भन्नु पदाधिकारीमा महिलाको खै त सुनिस्चिता, थारुको खै त अवस्था झ्यालढोका सबै बन्द गरेपनि ढोकामा को आउछ त ? उहाँ जे कुराको प्रवर्तक हो त्यसको बिरुद्धमा लाग्नुभएन । नेतृत्वको सुनिश्चिततापछि मात्र हामी मान्दछौं, मधेसी, जनजाती, दलित सबैले मुलुकका लागि धेरै योगदान गरेका छन्, उनीहरुको योगदानलाई पनि कदर गर्नुपर्छ । पदाधिकारीभित्र महिला, जनजाती, दलीत कसैलाई प्रवेश गराउनु पर्छ । हाम्रो माग त्यहीमात्र हो, बैधानिक रुपमा समाबेशीताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, बरु यसपाली एक क्लस्टरबाट भए अर्कोपटक त्यसको अर्कोबाट राख्नपर्छ । सबैपक्षलाई समेटेर काँग्रेसको विधान संसोधन नभए हामीले बनाएको संबिधानलाई हामीले नै मिचेको ठहरीन्छ,
बस अनियन्त्रित भई खोलामा खस्दा एकको मृत्यु, पच्चीस घाइते
कृषिको विकास बिना देशको विकास असम्भवः कृषिमन्त्री थापा
ओली सरकारलाई देश र जनता विरोधी तीनै विधेयक फिर्ता लिन काँग्रेसको चेतावनी
नगरपालिकामा आपत्कालीन केन्द्र
चर्चित नायीका प्रियंका र नायक आयुषमान फ्यानसँग मोःमोःउत्सवमा रमाउदैँ
चैत्र २९ गते नायक अनमोल र सलिनमानबिच प्रतिस्पर्धा